Iitattoo zoonomadudwane neentyatyambo: ingqokelela yoyilo | Ukuzoba
UFernando Prada | | IiTattoos zezilwanyana, Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo
Kwihlabathi leetattoo kukho uthotho lwezinto ezihlala kumanqaku okuqala kudweliso loyilo oludumileyo kunye nakwimfuno yee studio ezihanjiswa kwihlabathi liphela. Inkqubo ye- I tattoo zoonomadudwane Kunye ne iitattoo ze rose yimizekelo emibini ecacileyo yoku.
Ngoku, kuya kwenzeka ntoni xa sizidibanisa? Inkqubo ye- I-scorpion tattoos kunye neeroses zithandwa kakhulu kunokuba ungalindela.
1 Intsingiselo yee-scorpion tattoos ezineeroses
2 Iifoto zeTattoos zoonomadudwane neRoses
Intsingiselo yee-scorpion tattoos ezineeroses
Kodwa masiqale ekuqaleni, zithetha ukuthini ii-scorpion tattoos? Kumazwe apho esi silwanyana siyindalo, sinokubona inkcubeko ekhulayo esijikelezileyo kwaye, ke, kuyinto eqhelekileyo ukuba uluntu luzifake kwiintsomi nakwiintsomi zalo. Ke, unomadudwane ubonwa njengomfuziselo wokukhusela kunye nokufa.
Kwiinkcubeko ezinje UmYiputa unomadudwane wabonwa njengohlobo olwalusetyenziswa enetyhefu, phakathi kwezinye izinto, njengendlela yokwenza ukuba abafazi bazale. Wayehlonitshwa kakhulu de UIsis ngokwakhe yayinoonomadudwane ababini umkhuseli.
Ngelixa unomadudwane sisilwanyana esinexabiso elinzulu lokomfuziselo ngenxa yokubonakala, indlela yokuziphatha neempawu zayo; I-rose yenye yeentyatyambo ezibhalwe kakhulu kwihlabathi. Kwaye ineentsingiselo ezininzi ezahlukileyo ngokuxhomekeke kumbala weepalali zayo. Kule nqaku siqokelela zonke iintlobo zeetato ze-scorpion ngeeroses.
Kulo buddhism Sikwafumana izingqinisiso kule arthropod njenge uphawu loxolo ukuba usisongelo okanye uhlaselo kuphela xa eziva esengozini.
Ukwazi oku, kuqhelekile kubantu abane-tattoo yoonomadudwane ukuba babe nobuntu obukhuselayo okanye "bokugcina" ukuba babakhathalele ababuthathaka nabangenakuzikhusela. Nangona singenakubulibala ubunjani bayo kwaye nayo inakho ifanekisela iintlungu okanye ukufa ngakumbi abantu abadala, abantwana kunye nabantu abanempilo enkenenkene.
Ngokwesiqhelo, abantu abane-scorpion tattooed (nokuba bayithatha phi) bathanda ukuba njalo abantu abangamalolo abafuna indlela yabo ngaphandle kwentlungu okanye isizungu esinokubandakanya oku. Zibonakaliswe ngokuba yomelele kwaye izimele ngaphandle kokulibala abo bamngqongileyo.
Kwelinye icala, sinez tattoos ze rose. Masiqale ngokuchaza intsingiselo yaso kancinci; Sonke sinomdla weeroses ngenxa yemilo kunye nevumba labo; are intle kwaye intekenteke kodwa ameva abo asikhumbuza ukuba banako "Yingozi" njengoko basihlikihlayo kwaye besenza wophe.
Ke siyabaqonda abantu abane-rose tattooed, abantu ukuba, ngaxa lithile ebomini bakhe, kwafuneka ukuba "benze" ameva ukuzikhusela ngokweemvakalelo kwihlabathi elibangqongileyo. Kodwa, bakuba bekhulile kwaye xa «bachuma«, Zaba ziiroses ezintle ukuba basitsalela ngobuhle (ngaphakathi nangaphandle), ngevumba, ngendlela okanye ngokucinga, kodwa oko akuthethi ukuba badlule kwiimeko ezinzima kakhulu ebomini babo ezabaguqula baba ngabantu esibaziyo ngameva abo anokusichukumisa asenze sopha.
Xa sithetha ngazo I-scorpion tattoos kunye neeroses Asibhekiseli ngokukodwa kuonomadudwane oxutywe ne rose, nangona kuyinyani ukuba olu hlobo loyilo luxhaphake kakhulu. Abantu abaninzi babheja lungisa i-scorpion yeklasikhi endaweni ye-stinger yayo nge-rose. Ngale ndlela, sinokuphelisa imeko enobungozi nengalindelekanga ye-arthropod kwaye songeze ubuhle kunye nobumnandi obungqonge iiroses.
Abantu abanoonomadudwane abapeyilwe ngeroses kwindawo apho kufuneka khona isitovu, bahlala njalo abantu nge ubuntu ochwayithileyo kwaye kufutshane injenge rose kodwa yintoni abayi kulibazisa ukukhupha "izibopho" xa izinto zingahambi kakuhle okanye zivakalelwa kukuba abantu abeza kuwe benza njalo ngeenjongo ezifihlakeleyo okanye ukwenzakalisa okanye ukuzenzela.
Le ndibaniselwano yazo zombini ii-tatoo ibonisa ukuba umntu onako khula kwaye ukhule ngaphakathi iimeko ezinobungqongqo kunye nokungaphumeleli esinokuyicinga kwaye yintoni hayi ngenxa yeso sizathu kufuneka ibe ngumntu onobubi okanye ofuna ukonzakalisa abanye, njengoko kuhlala kukholwa.
Ngoku makhe sijonge ezinye zeendawo esinokuzoba kuzo eziyilo, nangona sikushiyele ezinye iifoto ngezimvo zale tattoos. Abasebenzisi abenze umvambo ngoonomadudwane, bavame ukwenza njalo iingalo zangaphambili okanye i-quadriceps. I kuqala kuba ayisiyiyo ndawo ibuhlungu kakhulu kwaye apho ungakhona ubone ngokucacileyo uyilo lwe tattoo kunye segunda ngokuba yindawo ebanzi kakhulu leyo iyavuma uyilo olukhulu kunye noluneenkcukacha.
Kuqheleke kakhulu ukufumana oonomadudwane abakhatshwa ziiroses ezahlukileyo ezihombisa itattoo okanye ezihamba nesilwanyana ngokwaso. Kwigalari ehamba neli nqaku sinokubona ukuba zinokubonakala njani zombini izinto emzimbeni womntu. Ngaphandle kokuba sidibanisa zombini ezi zinto asizukutshintsha okanye sitshintshe Intsingiselo yantlandlolo yeetadi ze scorpion kunye nee tattoos ze rose.
Isishwankathelo, uyilo kunye neendawo zokubonisa iitvorpor ngeeroses zininzi kwaye zahlukahlukene kakhulu, kuxhomekeke kulowo nalowo ukunika oko ukuchukumisa umntu eya kuyenza ngokupheleleyo eyahlukileyo neyodwa.
Iifoto zeTattoos zoonomadudwane neRoses
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » IiTattoos zezilwanyana » Iitoto zeScorpion ezineeroses: indibaniselwano engalindelekanga